Wasiirka Arimaha Gudaha Puntland ayaa sheegey in ku jiraan Daminta Colaada Towfiiq - Awdinle Online
Wasiirka Arimaha Gudaha Puntland ayaa sheegey in ku jiraan Daminta Colaada Towfiiq
December, 17, 2019 (AO) – koox wafdi ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland, ayaa gaaray degmada Towfiiq ee gobolka Mudug, halkaasi oo uu ka socda dadaalo laguso afjarayo colaad dhextaala labo beelood oo kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, ayaa sheegay Puntland inay diyaar u tahay in nabada la xoojiyo oo aan dib loosoo celin colaadii gobolka Mudug aafeysay.
Wasiir Dhabancad ayaa sheegay Puntland iyo Galmudug inay si wadajir ah uga shaqeynayaan nabada, isagoo meesha ka saaray cid saddexaad oo soo dhex geli karta labada maamul ee dadkooda dirirtu dhexmartay.
Hadalka wasiirka arrimaha gudaha ayaa kusoo beegamaya iyadoo maalmo kahor saraakiil ka socda ciiddanka xoogga Soomaaliya ay heshiis xabbad joojin ah dhex dhigeen labada beelood ee dagaalamay.
Puntland oo Towfiiq u aqoonsan degmo katirsan degaanadeeda, ayaa marar badan colaad kusoo laalaabatay, mana jirto xal waara oo laga gaaray
Previous articleRed Sea Geopolitics: Six Plotlines to Watch
Next articleQatari Foreign Minister says early talks with Saudi Arabia have broken stalemate